75W Ebube Motion Egwuregwu Ngwá Ngwá Ọrụ China Manufacturer
Nkọwa:Ejiri Oghere Ndị Na-enye Garage,Sensor Uche Garage,Ebe nchekwa ụgbọala ụgbọala
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > 60w Na-ekpuchi Ìhè > 75W Ebube Motion Egwuregwu Ngwá Ngwá Ọrụ
Anyị 75 na-egbukepụ egbukepụ egbuke ụgbọala ụgbọala Garage mere na elu Lumen mmepụta LED ibe, 5000k ìhè ìhè. Nke a 75W Garage Ịgba Ọkụ Mmiri na -ejikọta 250W HPS / HID / HALITE ìhè ya na ọkwa dị elu nke 120lumens per watt, ruo 9000lm na obere obere lumen; Ogologo ogologo ndụ ruo 50,000hrs. Oghere Ibu Garage elu a na-emeso ya na antistatic, nke a na-ahụkarị ma ọ bụ ihe na-eme ka ọ ghara ịdị na-acha; Ngwongwo na-emepụta ihe na-eme ka ntinye dị mfe na ụdọ nchebe igwe anaghị edozi nke a na-eme ka ịmebe ọkụ ọkụ ụgbọala na- echekwa nchedo abụọ.
Ụlọ ụgbọala anyị na-emepụta ihe ọkụ ọkụ bụ IP65 waterproof power supply, screws fixing protection, silicon gasket ụzọ nke niile na-eme ka ụgbọala na-adọba ụgbọala usoro mmechi mmiri;
75W Ebube Motion Egwuregwu Ịgba Ọkụ Na-enwu Ogologo Mmiri Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri Oghere Ndị Na-enye Garage Sensor Uche Garage Ebe nchekwa ụgbọala ụgbọala Ejiri Oghere Ndị Na-ere Garage Ejiri oghere dị elu nke 50W Ejiri oghere Arena Ejiri Ntanye Akara Oge Iyi Ejiri Ogige Uhie Na-acha